के विवाह गर्नैपर्छ भन्ने छ ? – Jagaran Nepal
हरेक पटकको भेटमा अनि बिहे कहिले त ? भनेर सोधिने प्रश्नले टाउको दुखिसकेको हुन्छ। अझ कतिपय त केटाको फोटो, घरकुल खान्दानको कुरासहित आइपुग्छन्, हाँसेर टार्नु बाहेकको विकल्प हुँदैन।
शिक्षित परिवारमा पनि विवाहपछि श्रीमतीले घर सम्हाल्ने र श्रीमानले पैसा कमाएर ल्याउने भन्ने परम्परागत सोच बदलिन सकेको छैन। जसले गर्दा कतिपय छोरी मान्छेको पढाइ माटोमै गएर मिल्ने गर्छ।यही प्रसंग जोडिरहँदा मलाई मसँगै पढ्ने एक जना मेहेनती केटी साथीको याद आयो। जो परिवार र समाजको दबावका कारण भविष्यलाई नै दाउमा लगाएर विवाह गरी गृहिणीमा मात्रै सीमित हुन पुगेकी थिई।
अहिले पनि नेपाली समाजमा हामीले अध्ययन गर्‍यो भने धेरै बावुआमाले पढाइ सक, केही गर, अस्तित्व सहितको मानिस बन् अनि विस्तारै बिहे गरौंला भनेर कहिल्यै प्रेरित नै गर्दैनन्। बरु उनीहरूलाई यही चिन्ता हुन्छ राम्रो ज्वाइँ कहाँबाट खोज्ने? ज्वाइँ राम्रो भए त छोरीले किन जागिर खानुपर्‍यो अनि ज्वाइँका लागि मापदण्ड हुन्छन्, अष्ट्रेलिया, अमेरिका वा युरोपियन मुलुकतिर भएको, नेपालमा भए सरकारी जागिर खाने, वा काठमाडौंमा टन्न धनसम्पत्ति भएको कुलघरानको छोरो यस्तै यस्तै।
कथन नै पनि छ, एउटी महिला शिक्षित भइन् वा सक्षम भइन् भने संसार नै शिक्षित हुन्छ परिवर्तन हुन्छ। त्यही कथनलाई आधार मान्ने हो भने पनि एउटी छोरीलाई छोरीबाट बुहारी बनाउनुभन्दा पहिला सक्षम बनाउनु आवश्यक छ। तर, यहाँ त २० वर्ष कटेका छोरीहरूको त बिहे गराइदिनै हतार हुन्छ। सक्षम र स्वाबलम्बी नागरिक बन्नुभन्दा नि पहिल्यै बुहारी बन्न दबाव दिइन्छ।
माथि उल्लेख भएका विषयवस्तुले छोरी मान्छे, केही गर्न सक्दैनन्, गरेका छैनन्, अवसर नै पाएका छैनन् भन्ने उठान गरेको होइन, नेपालका कैयौं महत्वपूर्ण निकायहरूमा हाल पनि कसैका छोरी, कसैका बुहारी वा कसैका श्रीमतीको महत्वपूर्ण सहभागिता छ। अझ युरोपियन देशमा त राज्यको कार्यकारी प्रमुखमा महिला नै रहेका छन्। जसले के प्रष्ट बनाउँछ भने छोरीमा क्षमताको होइन, अवसर, प्रेरणा, हौसला र आत्मविश्वासको कमी छ।
विवाह जीवनको अनिवार्य पाटो भए पनि अपरिहार्य भने होइन, केही गर्छु भन्नेका लागि विवाहबन्धन बाधक बनिदिँदा धेरै प्रतिभाशाली क्षमताहरू सेलाएर जाने गरेका छन्। तर केहीले भने विवाहपछि पनि श्रीमान वा परिवारको सहयोगमा आफ्नो नाम राखेका छन्। केही बनेर केही गरेर देखाएका छन्, ती भनेका केही अपवाद केस हुन् अधिकांशका हकमा भने छिटो विवाह र छोरीलाई बुहारी मात्रै बनाउने सामाजिक मनोवृत्तिका कारण प्रतिभा र चाहनाहरू ओइलिएर गएका छन्।
तसर्थ, बिहे कहिले गर्ने भनेर सोध्नु पहिले केही बन्न वा केही गर्न प्रेरित गर्नुस्, के गर्‍यो वा गर्दैछौ भनेर प्रश्न गर्नुस्।छोरीलाई बुहारीभन्दा पहिले सक्षम नागरिक बन्न प्रेरित गरौं।